Ibrahimovic Oo Difaacay Waxqabadka Wayne Rooney
HomeWararka MaantaIbrahimovic Oo Difaacay Waxqabadka Wayne Rooney
25/11/2016 Abdiwahab Ahmed
Zlatan Ibrahimovic ayaa amaanay kabtanka Manchester United ee Wayne Rooney oo uu ku tilmaamay ciyaartoy jid habboon ku taagan, una qalma in la ixtiraamo, kaddib bandhig ciyaareed wanaagsan oo uu muujiyey ciyaartii Feyenood ay 4-0 ku karbaasheen.
Rooney oo 31 jir ah, ayaa dhaliyey goolkiisii 39aad ee horyaallada Yurub, kaas oo ahaa goolka koowaad ee goolal afar ah oo ay ku jiidheen kooxda reer Holland, waxaana si ay u xaqiijiyaan in ay ka mid noqdaan 32-ka kooxood ee Europa League, iyagoo u baahan inay ka badiyaan Zorya Luhansk.
Goolka uu Rooney dhaliyey, waxa kale oo uu ku jebiyey rikoodh uu hore u dhigay Sir Bobby Charlton oo u dhaliyey Manchester 249 gool.
Ibrahimovic oo sifaynaya Rooney, ayaa waxa uu yidhi: “Waa shakhsii wanaagsan, waanan ku faraxsanahay rikoodhka uu jebiyey, laakiin waxaan ka caawin doonaa in uu goolal kale dhaliyo, si aan rikoodh u gaar ah oo uu leeyahay u arko.” Sidaas ayuu yidhi Rooney oo u warramay BBC Sport.
Maradona Oo U Faanay Ciyaartooyada Reer Yurub, Hana Hadlay Daroogada
Watch: Sevilla 3-3 Liverpool – All Goals & Highlights
21/11/2017 Diiriye Ahmed
Van Persie Oo Fenerbahce Salaasada Bandhig U Samayn Doonto